Iinyawo ezinzima. Yintoni endiyenzayo?
Ukulimaza imilenze yethu yabasetyhini kunokwenza ngezizathu ezahlukeneyo. Kuxhomekeke kwizinto ezibangela intlungu emilenzeni, kufuneka ufune iindlela zokusombulula ingxaki.
1 imbangela yentlungu yomlenze - i-varicose veins
Nangona kungekho bukho ubungqina obubonakalayo be-varicose kwimilenze, njenge-asterisk ye-vascular, i-veins eluhlaza okweqaqambileyo, iqhuma kubo, kodwa uhlala uvakalelwa intlungu kunye nobunzima emilenzeni yakho, ukwandisa kusihlwa, kufuneka uhlangabezane nale ngxaki ngokukhawuleza kunokwenzeka kwi-phlebologist.
Iimvumba ze-Varicose zibuqili kwaye zizibonakalisa ngokwawo kumanyathelo okuqala, xa unako ukukhawuleza uncede ezinyaweni kwaye ungagqithisi isifo ngale ndlela.
Kugqirha . Yintoni eya kuyenza i-phlebologist? Uya kukuqondisa kwinkqubo engenabuhlungu ye-ultrasound-dopplerography. Uhlalutyo luya kuvumela ugqirha ukuba axele ingxaki yesigulane, imeko yeemvini zakhe. Ngokuxhomekeke kwisifundo, amayeza afanelekileyo aya kunikwa.
Kungenzeka ukuba, ngaphezu kweemveliso ezizodwa, uya kunikwa ugqirha ukuba ugqoke iingubo ezingaphantsi kweengubo ukuze uxhase imilenze emilenzeni yakho. Kwakhona, unokufuna ukutyelela iofisi yenkcubeko yomzimba kunye neyomzimba okanye ukwenza imilenze yokuqhuba ekhaya. Ngaloo ndlela, wena kunye ne-varicose unokongezelela ukunceda imilenze yakho ngeendlela ezilandelayo.
Ukutya kunye nemivilini ye-varicose . Gcina ukutya okucetyiswa yizondlo zezilonda ze-varicose. Ngokuqhelekileyo, izilonda ze-varicose zenzeka ngokunyuka komzimba. Ngoko, kuya kufuneka sitshitshise ama-pounds angaphezulu, ukuze singenzi umthwalo ongeyomfuneko we-nanogram. Ukutya okukufanayo ngeli xesha kufuneka kube yi-calorie ephantsi (ukutya okungaphezulu kwama-1300-1500 kcal ngosuku). Ukongeza, kufuneka iqulethe iifayili, ngaphezu kwefiber, imifuno kunye neziqhamo. Iiprotheyini ezivuno kunye nezilwanyana ziqulethe inyama yenkomo, inhlanzi, umvundla kunye nenkukhu, kunye neentonga, i-soy, iimbotyi. Lungisa iiprotheni izitya ze sibini, ubilise, ubhaka, kodwa ungafri kwioli kunye naskovorode.
Qinisekisa ukuba ungene kwimenyu yezityalo zemifuno kunye nejusi kwi-nettle encane, eya kuhlambulula iinqanawa, iza kususa iinkqubo ezivuthayo kuzo. Ebusika, i-nettle kufuneka ithululelwe ngamanzi abilayo, mayeke, aphule kwaye aphuze isigamu seglasi 2-3 amaxesha ngosuku.
Ukuphelisa utywala kwi-sperm yakho, iziphuzo ze-carbonate, ishukela, iimveliso zefriji, othosiweyo kunye nekhofi. I-pint yeekitha ezilodwa kunye neesiqingatha zamanzi kunye neentsuba zemifuno emini ngosuku.
Amachiza omdabu kwiimvumba ze-varicose . Faka isicelo kwiimvini emilenzeni yeengcambu zetamatato eluhlaza. Ungasebenzisa igalikhi egayiweyo, i-oil infusion, njenge-compress. Ukuba izitamatayi zingagcinwa ixesha elide, zisebenzise izilwanyana kwiiyure eziyi-3-4, kungekudala.
Iibhondi ezomileyo ze-hops zityhalaza indebe yamanzi abilayo, mayeke. Gxininisa uphinde uphuze ukumnika i-cup cup ngaphambi kokutya.
Ukuncedisa ukutya okunomdla kumdaka, uthele iglasi yamanzi abilayo. Vumela ukuba ume uze upholile. Ukunyamezela, yongeza kwi-infusion i-spoonful yobusi bendalo. Phuza i-alimondi isiphuzo seglasi ngaphambi kokutya.
2 ubangela intlungu yomlenze - iinyawo ezinqabileyo okanye ukunyuka kweenyawo
Ngeenyawo ezintle kunye nezinye iintlobo zeenyawo ezinokukhubazeka, ukuhamba ngokuqhelekileyo kubangela ukukhathala okukhawulezileyo kweenyawo, kwaye intlungu ibe kubo. Ewe, ukuba iinyawo zakho azigqoke izicathulo ezingenakuthathekayo, ezinokuba neenyawo ezinempilo zenza uhlupheke.
Ukuguqulwa kweenyawo kubakho kwasebuncinaneni. Ukuyilungisa oko kunokwenzeka, oogqirha-oogqirha bezilwanyana baqwalasela, kuphela ngongenelelo olunyango. Kodwa ukwenza okanye ukungasebenzi, kuphela isampuli esenza isigqibo. Konke kuxhomekeke ekubeni ubuninzi be-flatfoot okanye ukukhubazeka kwonyawo kuthintela ukuhlala kwayo ngokuqhelekileyo. Kodwa kunciphisa ukubonakaliswa kweenyawo ezintle, kubangele intlungu kwiinyawo, ngokuqinisekileyo ngombutho wendlela engeyiyo yokuhlinzwa.
Izindlela zokulahla intlungu yomlenze ngeenyawo ezintle. Fumana izihlangu zakho kwisithende esisezantsi. Yona yedwa yedwa okanye, ngokuchaseneyo, isithende esiphezulu kakhulu siya kukubangela intlungu rhoqo emilenzeni yakho. Ungakhetha ukhetho olukhethekileyo lweentambo ze-sortopedic. Iingcingo zama-orthopedic kufuneka zigqweke ngaphakathi kwezihlangu. Uninzi lweentlobo zezemidlalo kubasetyhini zixhotyiswe ngefesolisi enjalo kunye neenkqubo ezikhethiweyo ezakhiweyo.
Hamba rhoqo kangangoko kunokwenzeka kwi-massage mat. Fumana isisityezelo sokubhukuda kweenyawo kunye nexesha lokukwenza kunye nokuzihlaziya okuphumayo kweenyawo.
Hlanganisa iipenisi ze-tennis kunye neenyawo zakho okanye ipensela phantsi, uhlambulule iinyawo kunye nama-massagers-mechanical massage.
Funda amanyathelo athile ukusuka kumjikelezo wezokwelapha-umzimba, uncetyiswa ukuyeka izifo ze-flatfoot. Phakathi kwezi zinto ziphumelelayo zilandelayo.
Ukuzilolonga ngeenyawo ezintle . Yima, uhamba kancane kwizithende ze-nanoscale kunye nomva. Emva koko, ukusuka kwisikhundla kwizwane zakho ezinzwane, ngokukhawuleza ugqithise inxalenye engaphenduliweyo yeenyawo zakho kwaye uphinde ukhuphuke ezinzwaneni zakho. Gqitha ngaphandle kweenyawo ngaphakathi nangemuva. Hamba ujikeleze indlu kwizwane zakho ezinzwane. U-Sozleduduet uhamba ngaphandle kweenyawo, podzhal phantsi kwezandla zakhe ezinzwane.
3 imbangela yentlungu yomlenze - isistim spusm
Ukuxhaswa kwiimisipha kunye ne-muscle spasm kwimilenze, kwaye kunye nabo kunye nosizi olunzima okanye olubuhlungu luvela emva kweyure enye okanye ezimbini ukuhamba kwii-heels-studs. Ubuhlungu kulo mzekelo bubekwe kwingingqi yesigxathu seenyawo kunye nesifuba sethole. Le meko iqhelekile kwimeko yokujonga i-physiology. Imveliso ilula. Ukuba unesidima esinzima ngokugqoka izicathulo eziphezulu, zama ukunciphisa isithende ngokukhetha ezinye izicathulo. Ungasebenzisa izithende eziphezulu. Kwizithende ezinjalo, ukuma kuthatha indawo eqhelekileyo kuyo, kwaye i-wedge ikuvumela ukuba ube mude, ithetha ukunciphisa.
Hlaziya imisipha yomlenze xa ugqoke izicathulo kwizithende eziphakamileyo ukunceda ukuhlamba iinyawo, ukwenza ukuzithoba ukukhupha imilenze. Kuze kube kutshanje, uxinzelelo olungapheliyo loogqirha-odokotela lwacetyiswa ukuba lususwe ngoncedo lweenjini zeBotox. Kodwa namhlanje iingcali zithatha le nkqubo. Inyaniso kukuba iinjenisi ezinjalo zenza ulungiso olungunaphakade lonyawo. Kwaye ngokugqithiseleyo, "ixhoba leBotox" liya kulungelelanisa ukungenelela ngokukhawuleza.
4 imbangela yentlungu yomlenze - iingxaki ngamalungu kunye nomgudu
Kwakhona kubonakala ngathi, ukuphulwa komsebenzi kunye nokuvakalelwa kwemilenze? Nangona kunjalo, i-scoliosis efanayo inokubangela intlungu ebuhlungu kwimilenze xa ihamba.
Utshintsho oludibeneyo kwimilenze, i-arthrosis (ithambo elijikelezayo ngenyawo lesithupha), i-arthritis (umzekelo, i-calcaneal spur ibhekisela kwimitshintsho ye-arthritic) ihambelana ngqo nentlungu emilenzeni, ngakumbi xa igqoke izicathulo ezingakhululekiyo.
Ukulwa nezifo zamalungu omgudu ulandela kuphela ngoncedo lwagqirha beengcali (i-neurologist, i-orthopedist, neurosurgeon). Kwinkqubo yokonyango, ngaphandle kweemvavanyo zegazi, ukuhlolwa kwe-ultrasound kunye novavanyo lwe-x-ray, iintlobo ezahlukahlukeneyo zokusilalisa, ukutya, ukuguqula umzimba, i-gymnastics yokwelapha, i-hirudotherapy isetyenziswa.
Yintoni ongayenza wena? Ukunciphisa intlungu yobuhlungu bomnxeba kunye kunye, qalela ukuba ungagqoki isihlangu esincinci, esingakhululekile.
Ukunciphisa ubunzima bakho, njengoko iikhilogram ezidlulileyo zichaphazela umgangatho wemilenze. Zama ukuba ungadlulanga imilenze yakho ngokugqithiseleyo.
Xa ulala phantsi, faka phantsi kweenyawo zakho umncinci omncinci okanye u-platen, ukuze balale ngokukhawuleza kwiindawo ezingenanto.
Zama ukudla ukutya okuncinci kancinci kwimenyu yakho. Jonga inani eliqhelekileyo le-calcium egazini, ukunika iimvavanyo ngezihlandlo zophando. I-calcium ephakamileyo egazini ibangela izifo ze-arthritic and arthritic. Ukungabikho kwekhalsiyamu egazini kukukhokelela ekutyeni kwethambo emzimbeni.
Ukulahla: unyango lokungazinzi kunye nezilwanyana zomntu
Indlela yokulahlekelwa isisindo ebusika ngaphandle kokutya kunye nempilo
Ukucoca iinqanawa ngegalikhi
Aloe ukulahleka kwesisindo
I-pasta ebonakalayo ene-turkey kunye nama-mushroom
Indlela yokusindisa iinwele
Indlela yokubopha ngokufanelekileyo ibhanana
Isifo sesisu esisemntwaneni
8 iimpawu zokuthi akayiyo ingxaki malunga nolwalamano lwakho
Okroshka kwi bhiya
Iimpawu zonyango kunye nemilingo yesafire
U-Stas Kostyushkin ucheba kwiimeko ezinzima
Umdlali obalaseleyo uMeryl Streep
Yintoni evuyisa bonke abameli besilisa?
Indlela yokulahlekelwa isisindo kwimifuno kwiiveki ezimbini
Indlela yokubuyisa umyeni wakhe?
Yintoni abantu abangayithobeliyo?
Unyango lwe-papilloma kunye nezilwanyana zomntu